DOGARA KWADORO IHAPU APC, SONYE NA PDP
Home pokies apple application https://isimbido.tv/online-casino-app-review-blogs/
in Akuko Ala Anyi, Politics
Ọkà okwu nke Ụlọ Ndị Nnọchiteanya, Jacob Dogara, nwere ike iwepụ All Progressives Congress (APC) n’izu a. Dogara, onye na-anọghị na parley site APC House caucus na Adams Oshiomhole-edu National Working Committee (NWC) na nso nso a, na-egbu oge mgbapụta ya site na oriri ikpeazụ izu (Tuesday) mgbe 36 isii nke ndị ọrụ ya decamped to the opposition Peoples Democratic Party (PDP).
The Guardian mụtara na onye ọkà okwu ahụ, bụ onye kwupụtara na ọ kwụsịrị ihe omume nke nnọkọ ahụ n’ụlọ ya bụ Bauchi State n’ihi nkwenye ya na Gọvanọ Mohammed Abubakar, kwetara ịkwusa ọkwa ya n’oge gara aga na mpaghara Bogoro / Dass / Tafawa Balewa. otu izu. Otu ndi otu ndi otu ndi choro na ulo nke ndi nnochite anya n’okpuru nzuko omeiwu nke Omeiwu Democrats (PDG) kwadoro mkpebi Dogara ka ha wepu APC.
Ndi otu ndi otu a si na nzuko nzuko ndi ozo bilie ubochi, dido aka na APC ka ha ghara ime ihe ndi ozo iji gbochie Dogara ka ha ghara imeru PDP. Onye isi ahia nke ndi otu, Mr. Timothy Simon Golu, kwuru na “ihe efu na ihe mkpofu nke oge “APC gbalịsiri ike ịkwụsị Dogara site na ịga n’ihu mkpebi ahụ.
Golu, onye bụ onyeisi oche nke Ụlọ Kọmitii nke Iwu Ụlọ Iwu na Nnyocha, kwuru, sị: “Ọ bụ ihe na-agbagha na APC na-agba ọsọ na-arịọ ka ọkà okwu ahụ nọrọ na nnọkọ oriri na ụma nke kwadoro na ọ dị mkpa na onyinye na ịdị adị ya.
“Nemesis emeela ka ndị na-eme egwuregwu ahụ nwee nkwurịta okwu dị ka ọkà okwu na ndị ọzọ nwere akọnuche kpebiri ịtọ ụlọikwuu ha na nnọkọ oriri na ọṅụṅụ (PDP) nke na-achọpụta na uru ụmụ mmadụ na-enweta karịa ndị mmadụ bụ ihe karịrị ọdịmma anụ ọhịa.” Dogara ga-enwe ntụpọ ọ bụla ọ bụla ọ na-ahọrọ na-enweghị egwu nke impeachment si n’ọkwá ya dịka Ọkà Okwu nke Ụlọ Ndị Nnọchiteanya. ”
Dị ka Golu si kwuo, ọ bụghị APC ka a họpụtara Dogara ka ọ bụrụ onye na-ekwuchitere Ụlọ Ndị Nnọchiteanya, na dịka ndị a, ndị otu a enweghị ike iwepụ ya. “Ọ bụ ihe a maara na APC rụrụ ọrụ megide mmalite ya, ma ndị ọzọ bụ onye hụrụ ma ghọta na mmụọ ya na-ahụ maka ya na-eme ya. N’ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ọkà okwu nke Ụlọ Ndị Nnọchiteanya, ọ bụghị nke Ndị Ọchịchị Na-enwe Ọganihu, “ka òtù ahụ kwuru
EJIDERE MMADU ISE MAKA MPO KIDINI NA NEPAL
“Ọ bụrụ na APC hụrụ Dogara n’anya nke ukwuu ma chọọ ya ka ọ nọrọ n’ụlọ mkpọrọ ya, gịnị kpatara ha ji weda ya ala n’oge nzukọ ndị mgbakọ ha mgbe a kpara nkata na ndị enyi ya niile ihere ma ọ bụ ezie na ọ bụ ọkwá ọchịchị kachasị elu na-ejide ya na North n’ebe ọwụwa anyanwụ na ọnụ ọgụgụ ụmụ amaala anọ nọ ná mba ahụ. “Òtù ahụ boro APC ebubo na a naghị akwụwa ya ụgwọ ma na-akwadoghị ya. “APC n’okpuru nduzi nke Oshiomhole bụ otu ndị na-eme ihe yiri ndị ihu abụọ na ndị ihu abụọ na-eche na ha bụ chi ndị chi niile na mmadụ nile aghaghị ijere ya ozi ma kwanyere ya isi, ma hà mere ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ.”
BUHARI NA-ETINYE UGBOELU AGHA NSOTE NDI OHI ZAMFARA
Golu kwuru na “ndị Naijiria ugbu a maara ihe ma chọpụta na ha gimmicks na egwuregwu, a gakwaghị aghọgbu ha ka anyị na-abịaru aka na ntuli aka 2019.” Ugbu a, ndị PDP bụ ndị ka ukwuu n’ime Ụlọ ahụ, anyị na-atụ anya ka ndị ọzọ nọ na APC. “Ndị Omeiwu nke Omeiwu, dị ka Golu si kwuo, na-asọpụrụ ihe karịrị mmadụ iri abụọ na abụọ na Ụlọ Nzukọ. “Anyị siri ike n’azụ Dogara ma mee ka ọ hụ na ọ ka na-ekwu okwu, ọbụna mgbe ọ nwụsịrị ka ọ bụrụ onye ọ bụla,” ka o kwuru.
Mana Director nke Strategic Communications, Muhammadu Buhari 2019 Mkpọsa nke ndi isi ochichi, Festus Keyamo, kwuru na ndi mmadu ndi isi ochichi na-emegide ndi mmadu adighi adighi emetụta onu ogugu ndi isi ochichi.Keyamo, SAN), kwadoro na Buhari ka ga-ejigide ọnọdụ ya n’enweghị nkwado nke ndị ntụpọ. O kwupụtara nchekwube na Buhari ga-enwetaghachi ala furu efu site na mpaghara ndịda na ndịda na ọwụwa anyanwụ nke ndị ọchịchị “ebe ọ masịrị mmasị n’inye ndokwa maka ihe ndị dị mkpa maka ụmụ amaala.”
IHE OMIMI:AKUKO MH370 ACHOPUTAGHI IHE KPATARA ODIDA
Keyamo kwadoro okwu ndị a: “N’ihe iri na abụọ ndị a, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto, Zamfara, Bauchi, Borno, Gombe, Yobe na Niger, nwere ihe karịrị nde mmadụ 30 edere aha ha, bụ ebe onyeisi oche meriri enwe oke oke aka na ntuli aka ndi ozo, karia n’afo 2011 na 2015. E mezuru nke a n’agbanyeghi na otutu ndi isi a na-achikota ndi isi ochichi karia nke ya. “
Tags: APCdogarahotIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnewsNIGERIANIGERIANPDPPOLITICSpostpostsupdate
NDI ISI: WEPU BUHARI SITE NA NSOGBU NKE ORIAKU
Ndị gọvanọ sị ọwụwa anyanwụ amachiela iji ụkwụ achịbata ehi
Ihe karịrị mmadụ iri atọ anwụọla dịka tanka gbawara na Benue
Ife ala nna anyị adịghị mkpa maka ịzọ ọkwa gọvanọ – Ụlọikpe
CAN ekelela Onyeisiala na Mmeri o nwetara